एसएसपीलाई धम्क्याएको परिणाम : विप्लवका ललितपुर सेक्रेटरी पक्राउ ! « Nepal Bahas
एसएसपीलाई धम्क्याएको परिणाम : विप्लवका ललितपुर सेक्रेटरी पक्राउ !
प्रकाशित मिति : १६ कार्तिक २०७७, आईतवार ११:२८
१६ कात्तिक, काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता ललितपुरबाट पक्राउ परेका छन् । ललितपुर जिल्ला सेक्रेटरी सावित्रा अधिकारी ‘विदुषी’ आइतबार पक्राउ परेकी हुन् । ललितपुरमा कोणसभा गर्ने तयारी भइरहेका बेला विदुषी पक्राउ परेकाे प्रहरीले जनाएको छ ।
उनले ललितपुरका प्रहरी प्रमुख एसएसपी टेकप्रसाद राईलाई धम्क्याएकी थिइन् । विप्लव समूहका ललितपुर जिल्ला समिति सदस्य सानुराज बज्राचार्यलाई पक्राउ गर्दै उनको कोठाबाट ठूलो परिमाणमा विष्फोटक पदार्थ बरामद गरेका बेला विदुषीले राईलाई धम्की दिएकी थिइन् ।